अशोकको परिक्षाबारे सोध्दा झर्किए टंक, भन्छन 'नर्सरीको एक्जाम दिदैन, ल के हुन्छ ?' (हेर्नुस् टेलिफोन संवाद) - Entertainment Khabar
अशोकको परिक्षाबारे सोध्दा झर्किए टंक, भन्छन ‘नर्सरीको एक्जाम दिदैन, ल के हुन्छ ?’ (हेर्नुस् टेलिफोन संवाद)
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ३०, २०७५ समय: २१:३३:१८
काठमाडौं/ पछिल्लो समय युट्युवमा निक्कै भाईरल भएका अशोक दर्जीका फ्यानहरु निक्कै छन् । उनको गीत मन पराएपछि यतिवेला उनको क्रेज ह्वात्तै बढेको पनि छ । जसको कारण असोकका शुभेच्छुकहरु उनको बारेमा केहि भईरहेको चिन्ता ब्यक्त गर्छन् । यहि क्रममा असोकको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा टंक बुढाथोकीले झपारेका छन् । ति युवाले टेलिफोनमा सोधेका छन्, असोकको परिक्षा छुटाएर कार्यक्रममा लान आट्नु भएछ परिक्षा सकिएपछि कार्यक्रममा लग्दा के हुन्थियो ? अहिले परीक्षा पनि सकियो कार्यक्रम पनि भएको छैन् ।
टंकले झर्किदै जवाफ दिएका छन् । असोकलाई पढाई र परीक्षा भन्दा विदेशको कार्यक्रम ठुलो हो । यो क्रेज पढेर नपाउने बताउदैं टंकले असोकको सर्वाधिकार आफुमा रहेको बताएका छन् । असोकको कार्यक्रम पढाई छोडेर लान टंकले मरिहत्ते गर्नु भनेको असोकलाई युज गरेर पैसा कमाउनु नै हो, असोकका फ्यानहरु भन्छन्, साँगीतिक कार्यक्रममा गएको र आएको पनि हिसाप पारदर्शी छैन् । असोकलाई आफुले हिट बनाएको टंक दावी गर्छन् । यति होकि टंक साँगीतिक क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छे हुन, तर असोकसँग टच भएपछि उनको व्यस्थता बढेको हो । हेर्नुस् टेलिफोन संवाद सहितको भिडियो :
असोकलाई दुहुना गाई बनाएर अहिले टंक उनको अध्ययन अध्यापनमा ध्यान दिईरहेका छैनन् । बरु आफ्नो युट्युवमा असोकको अनाश्वक भिडियो हालेर पैसा कमाईरहेका छन् । आफ्नो एकाधिकार जमाईरहेका छन् । यता असोकको घर बनाउन लागि पर्नेहरु दिनरात खटिरहेका छन् । मेहेनत गरिरहेका छन् । तर टंक भने हिसाप नदेखाउने घर निर्माणको पैसा निर्माण समितिलाई भनेको बेला नदिने जस्ता काम गरिरहेका छन् । हिजो असोक र उनको लागि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम र अध्ययन अध्यापन आवश्यक थियो भनेर उर्लाबारीमा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम भयो । साँगीतिक कक्षाको वातावरण बनाईयो ।
वेथेल स्कुलमा निशुल्क पढ्ने वातावरण बनाईयो । तर असोक हिट भएपछि उनको भविष्यको चिन्ता नराखी टंकले पैसा कमाउने केटो मात्र बनाउन लागिरहेका छन् । यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएको छ, असोकको पछि न पढाई हुन्छ न त साँगीतिक ज्ञान । असोकको क्रेजलाई पैसामा मात्र युज गर्नु असोकको भविष्य माथि खेलवाड हो । अहिले असोकले टंकको कारण अध्ययनमा समय दिन पाईरहेका छैनन् ।